Bakki bu'insi taasifamuuf, yaadannoo teessoo kam akka fayyadamtuLibreOffice himuu qabda. Masakichi odeeffannoo kanaa gaafatu yommuu ati yeroo jalqabaaf kakaastu ofumaan mul'ata fakkeenyaaf, qajoojii xalayaa daldalaa. Ejjatoowwan gadiiti tarreeffaman hordofuunis masakicha waamuu ni dandeessa.
Deetaan yaadannoo teessoocha bu'uuraa LibreOffice keessaa dubbisuu-qofa dha. Bu'uura keessaa deetaa teessoo ida'uu, gulaaluu, yookiin haquun hin danda'amu.
Masaka Madda Deetaa Teessoo
Masakicha Madda Deetaa Teessoo waamuuf, Faayilii - Masakoota - Madda Deetaa Teessoo fili.
Yaadannoo Teessoo Jiraataa Hujeekaan Galmeessuu
Sanduuqicha makaa Madda deetaa keessaa, yaadannoo teessoo sirnichaa yookiin madda deetaa akka yaadannoo teessootti fayyadamuuu barbaaddu filadhu.
Yoo yaadannoo teessoo sirnichaa LibreOffice keessaa akka madda deetaatti hamma ammaatti hin galmeessine tahe,qabdicha Bulchuu cuqaasi. Kuni gara Masaka Madda Deetaa Yaadannoo Teessootti si fudhata, kan keessatti yaadannoo teessoo kee akka madda deetaa haaraa LibreOffice keessaatti galmeessuu dandeessu.
Sanduuqicha makaa Table keessaa, gabatee kuusdeetaa akka yaadannoo teessootti fayyadamuu barbaaddu filadhu.
Field assignment jalatti, dirreewwan maqaa jalqabaa, kuubbaaniyaa, kutaa, fi kanaaf kana fakkatan maqoota dirree dhugaa yaadannoo teessoo kee keessatti fayyadan itti firoomsi.
Yommuu xumurtu, qaaqicha TOLE tiin cufi.
Amma maddi deetaa kee LibreOffice keessatti akka yaadannoo teessootti galmaa'eera. Yoo amma qajoojii akaakuu Walqunnamtii Daldalaa irraa bante, LibreOfficetiin qubee unkaaf dirreewwan sirrii ofumaan saaguu ni danda'a.
Title is: Yaadannoo Teessoo Galmeessuu